Ciyaarta Dinosaur ee Google: sida loogu ciyaaro khadka tooska ah, mobilkaaga ama PC-gaaga | War gadget
Qolka Ignatius | | Tababarada, Videogames
Dhab ahaantii dhammaantiin, ama ugu yaraantiina badankiin, waxaad kuheshaan taleefanka gacanta casriga ah ciyaar kale maxaa yeelay markii lagugu qasbo inaad sugto daqiiqado, markaad raacayso gaadiidka dadweynaha, markaad musqusha aadayso ...
Waqti ka dib, waxay u egtahay inaad ku daali doontid ciyaartaas oo aad raadsan doonto waxyaabo kale. Laakiin haddii tani aysan ahayn, maxaa yeelay waxaad dooneysaa in batteriga taleefankaaga casriga ahi uu sii dheeraado isaga oo aan ciyaarin, waxaad isticmaali kartaa ciyaarta dinosaur google, ciyaar si asal ahaan loogu soo daray biraawsarka Chrome.
Ciyaarta dinosaur ee Google waxay ku bilaabatay sidii dariiqa qosolka badan ee Chrome noogu wargaliyay in aanaan lahayn wax xiriir internet ah, sida xilligii dinosaurs, laakiin loo gudbiyay si xad dhaaf ah. Dinosaur-kaasi runti waa ciyaar, ciyaar aad u fudud taas oo ku jirta waxaan iska dhigeynaa kabaha dinosaur-ka waana inaan ka boodno caqabadaha, marki hore kaktekus, laakiin markaan horay u socono, marka lagu daro habeenka waxaan sidoo kale heleynaa pterodactyls meelo kala duwan, sidaa darteed mararka qaar waa inaan boodno si aan uga fogaanno ama aan ugu adkeysano dhulka, sida aan awoodno ka arag GIF-ga kore.
Aniguna waxaan leeyahay kuwa horumarey waxbadan, maxaa yeelay marka hore ciyaarta qabatooyin, iyo waxyaabo badan, dhibkeeda awgood, ilaa iyo intaad horumarka gaartid, xawaaraha dinosaurku wuu kordhayaa taas oo nagu qasbi doonta inaan si sax ah u xisaabino markaan bilaabayno inaan boodno si aanan ula dhicin caqabadaha.
T-Rex, maadaama ciyaartan loo magacaabay, waxaa laga heli karaa oo keliya mareegaha moobiilka ee Google Chrome, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa noocyada biraawsarka Google ee desktop-ka. In kasta oo ay run tahay in ciyaartan si toos ah nooga muuqanayso annaga oo aannaan lahayn qadka internetka, haddana maahan inaan ka go'no adduunka gebi ahaanba si aan ugu ciyaarno.
1 Khiyaamada lagu hormariyo inta ugu macquulsan T-Rex
2 Sida loogu ciyaaro ciyaarta dinosaur-ka Android
3 Sida loogu ciyaaro ciyaarta xayawaan qiroweyn ee iPhone / iPad / iPod taabashada
4 Sida loogu ciyaaro ciyaarta xayawaanku PC / Mac
Khiyaamada lagu hormariyo inta ugu macquulsan T-Rex
Haddii fikraddeennu tahay inaan ku ciyaarno taleefanka casriga ah ama kaniiniga, waa inaan maanka ku haynaa in aanaan haynin wax khiyaamo ah oo aan ku qabno, sidaas darteed waxay ku xirnaan doontaa khibradeena marka la xisaabinayo marka aan sameyno boodka u dhigma.
Labadaba nooca mobilada iyo nooca desktop-ka, awoodda boodku waxay ku xirnaan doontaa waqtiga aan furaha fureyno, markaa haddii aan riixno oo aan qabanno furaha booska, boodayaa inbadan in haddii aan mar kaliya dhaqso u riixno.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan ka ciyaarno kombiyuutarka, arrimuhu way ka fudud yihiin, maadaama aan adeegsan karno Alt ciyaarta hakad ku sii haysa. Waxaan sidoo kale dedejin karnaa xawaaraha dinosaur-ka adigoo gujinaya fallaarta hoose.
Sida loogu ciyaaro ciyaarta dinosaur-ka Android
Si aan ugu ciyaarno taleefannadeenna casriga ah ee 'Android', sida ugu dhaqsaha badan haddii aanan dooneyno inaan rakibno codsi kasta oo aan sidaas ku sameyn karno, waa in la joojiyo xiriirinta xogta iyo xiriirka WiFi labadaba, oo awood u siinaya habka diyaaradda.
Mar alla markii aan daminay labada xiriirba, waxaan fureynaa biraawsarka Chrome oo waxaan fureynaa tab cusub, tab ayaa si toos ah noo tusi doona dinosaur, kaas oo aan ku riixeyno si aan ugu raaxeysanno T-Rex isaga oo ka caawinaya inuu ka cararo cacti in waxay ku socdaan, sidii Heidi oo ku taal buuraha Switzerland.
Laakiin haddii aynaan rabin inaan gebi ahaanba ka go'no, waxaan ku rakibi karnaa codsiga Dino T-Rex aaladdayada, ciyaar bilaash ah oo laga heli karo Google Play Store, iyada oo loo marayo xiriirka soo socda iyo in Google si aan la fahmi karin loogu oggolaaday faa'iido, maaddaama ay na tusayso xayeysiinta si aan ugu awoodno inaan ku ciyaarno. Farqiga ugu weyn ee noocan uu ina siinayo ayaa ah in lagu heli karo shaashad buuxda oo boodboodyadu ay yara gaabinayaan.
Sida loogu ciyaaro ciyaarta xayawaan qiroweyn ee iPhone / iPad / iPod taabashada
Sidii aan idhi, T-Rex waxaa laga heli karaa dhammaan noocyada kala duwan ee Chrome meelaha laga heli karo, markaa iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada waxaan sidoo kale awood u yeelan doonnaa inaan ku ciyaarno adoo ka shaqeynaya habka diyaaradda aaladdayada iyo helitaanka a tab biraawsar cusub ama dib-u-cusbooneysiin kii u furnaa xilligaas.
Haddii aad rabto nooc casriyeysan, oo leh midabbo iyo xayawaanno kale, Steve - xayawaan qiroweyn boodaya macruufka waa ciyaarta aad raadineyso, ciyaar lagu rakibo xarunta ogeysiinta oo aan marwalba gacanta ugu hayno si ka dhakhso badan sidii aan ku raadin lahayn arjiga boodhka.
Steve - Qalabka Widgetfree
Sida loogu ciyaaro ciyaarta xayawaanku PC / Mac
Laakiin haddii waxa aan rabno inaan sameyno ay tahay inaan ugu raaxeysano T-Rex gurigeenna ama xafiiskeenna si aan uga go'no, waxaan ka faa'iideysan karnaa boggan internetka ah, bogga internetka ee ciyaarta laga heli karo adigoon ka jarin qalabkeena xiriirka internetka. Boggan wuxuu furi doonaa oo keliya muujinta ciyaarta haddii aan isticmaalno biraawsarka Chrome.
Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale haynaa boggan kale ee la yiraahdo T-Rex Orodyahanka. Labada noocba aad ayey daacad ugu yihiin ciyaarta asalka ah ee Chrome, waxaan dhihi karnaa inay isku nooc yihiin, laakiin waxay ka duwan tahay degelkii hore, kan wuxuu ka shaqeeyaa daalacayaasha kale.
Waxaan sidoo kale heysanaa xulashada asalka ah inaad awood u yeelatid inaad gasho T-Rex adigoon marin degel kasta adoo ku qoraya amarka soo socda baarka raadinta iyadoon lagusoo xiganin calaamadaha "chrome: // dino /" oo aad riixdo baarka booska si aad ciyaarta u bilowdo. Waxaan sidoo kale qori karnaa amarka soo socda iyadoon la soo xiganin "chrome: // network-error / -106" si aan u galno ciyaarta.
Internetka waxaan ka heli karnaa tiro daalacayaal ah oo ka baxsan Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera iyo kuwa kale, maaddaama ay jiraan daalacayaal kale oo badan oo suuqa jooga oo runtii iyagu waa fargeeto ah chrome, marka kiiskan, way u badan tahay, ma shaqeynayo gabi ahaanba, in adoo galaya lambarrada aan kor ku soo sheegnay cinwaanka cinwaanka waxaad fursad u leedahay inaad gasho T-Rex.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Ciyaarta xayawaanka Google
Xitaa ma aadan ciyaarin, waad iska soo baxday! Marka hore waxay isu bedeshaa habeen, ka dibna pterodactyls waxay bilaabaan inay ka muuqdaan meelo kala duwan. Taasi waa qiyaastii 600 dhibcood.
Ku jawaab nonabol